Semalt Wuxuu Sharaxayaa Sababta Looxirida Websaydhku Uu Muhiim Ugu Yahay Kobaca Ganacsigaaga
Mabda 'aasaasiga ah ee suuqgaynta guuleysta ayaa ah inaad ogaato macmiilkaaga oo aad ka codsato baahiyahooda. Ogaanshaha waxa booqdayaasha websaydhku ay raadinayaan iyo sida loo siiyo waxay samayn karaan ama jebin karaan ganacsi. Aaladaha falanqaynta ee websaydhku waxay qiimo weyn ku yeelan karaan helitaanka waxa ka dhigaya booqdayaashaadu inay saxeexaan iyo sida loogu beddelayo booqashooyinkooda iibka.
Maqaalka, waxaan ku sharixi doonaa waxa falanqaynta websaydhadu tahay iyo sababta ay muhiimka ugu tahay koritaanka ganacsigaaga.
Waa maxay falanqaynta bogga?
Falanqaynta shabakadda waa aruurinta macluumaadka ku saleysan shabakadda si loo helo aragtiyo iyo in kor loogu qaado khibradda isticmaalaha iyo joogitaanka khadka tooska ah.
Warbixinnada falanqaynta websaydha ee ku saabsan cidda soo booqda boggaaga iyo sida booqdayaashu u dhaqmayaan markii ay halkaas joogaan. Iyada oo la adeegsanaayo aalad falanqeyn oo wanaagsan, waxaad ku ogaan kartaa da'da soo booqdayaashaada, hiddehooda, halka ay ku nool yihiin, iyo inbadan. Waxaad sidoo kale ka heli kartaa, macno ahaan riix batoonka, waxa u horseeday websaydhkaaga, mudada ay halkaas ku joogeen iyo bogagga, iwm. Macluumaadka noocan ah ayaa muhiim u ah samaynta shabakaddaada sida ugu waxtarka badan uguna suuragalka ah iyo abuurista. Waxyaabaha rafcaanka u ah suuqa bartilmaameedkaaga Dhanka kale, waad ku sameyn kartaa horumar iyo isbedelo sida ku xusan warbixinnada falanqaynta bogga; Tani waxay gacan weyn ka geysan kartaa kobcinta meheraddaada.
Waa maxay sababta falanqaynta websaydhku ay waxtar u leedahay?
Baro booqdayaashaada oo ha wanaajiso khibradooda adeegsigooda!
Markii aad go'aan ka gaareyso meheraddaada, waxaa muhiim ah oo keliya inaadan ka taxadarin macmiilkaaga jira, laakiin halka ay suurtagal tahay in lagu hagaajiyo khibraddooda isticmaala. Go'aannada noocan oo kale ah waa inay sidoo kale, xaaladaha badankood, u adeegaan sidii ay u soo jiidan lahaayeen macaamiisha cusub. Iyadoo tan oo dhan maskaxda lagu hayo, inaad ogaato booqdayaasha websaydhkaagu waxay lama huraan u tahay samaynta go'aannada saxda ah.
Haddii aad fikrad ka haysid tirakoobka dadka soo booqda boggaaga - tusaale ahaan lab ama dheddig, da'da, halka ay ku nool yihiin, waxa ay danahooda yihiin, iwm - waxaad ku jiri doontaa meel wanaagsan oo aad ku hagaajiso khibraddooda isticmaala. Sidoo kale, haddii aad raadraaci karto aaladda, biraawsarrooyinka iyo nidaamyada hawlgalka booqdayaashaadu waxay u muuqdaan inay isticmaalayaan markaad galaangasho bartaada, waxaad sifiican u awood u yeelan doontaa inaad fiiriso oo aad horumariso iswaafajinta boggaaga.
Tusaale fudud ayaa ah in haddii aad lasocotid booqdayaashaada badankood adeegsanaya aaladaha mobilada, waxaad ogaan doontaa inaad mudnaanta siiso samaynta websaydhka-saaxiibtinimada leh. Sidoo kale, haddii aaladahaaga falanqaynta ay raad raacaan da'da iyo dheddigga booqdayaashaada, waxaad u habeyn kartaa websaydhka inuu noqdo mid waxtar badan oo u roonaanaya.
Ogaanshaha booqdayaashaadu waa habka ugu wanaagsan ee loogu habeeyo websaydhkaaga suuqa saxda ah. Hagaajinta noocan ahi waxay dadka ku dhiirrigelineysaa inay sii joogaan websaydhkaaga muddo dheer,, taa baddalkeed, waxay horseedi doontaa sicirka beddelka sare.
Soo ogow waxyaabaha ugu guulaha badan
Aaladaha falanqaynta ee websaydhku waxay iftiimi doonaan waxyaabahaaga ugu fiican. Waad baran kartaa sheyga soo jiidanaya aragtida ugu badan, booqashooyinka ugu dheer, iyo bogagga ay dadku soo booqdaan ka dib. Siyaabo kale, waxaad si fudud u arki kartaa waxyaabaha ugu guulaha badan, oo kuu oggolaanaya inaad u isticmaasho faa'iidadaada.
Tusaale ahaan, markii aad aqoonsato shay caan ah oo ka kooban, waxaad ku dari kartaa xiriiriyeyaal iibsasho, u yeer badhamada ficil, iwm bogga ama martida si toos ah ugu sahlan bogga diiwaangelinta. Kaliya ogaanshaha halka aad diiradda saareyso dadaalladaada ayaa kuu oggolaaneysa inaad sare u qaaddo heerka beddelkaaga iyo ganacsigaaga guud ahaan.
Si la mid ah, waad dib u shaqaaleysiin kartaa boggaga hogaaminaya waxaadna ku dari kartaa macluumaad cusub oo casriyeysan ama dhammaystiray muuqaalkiisa oo dhan. Intaa waxaa sii dheer, waad ku celin kartaa waxyaabaha guuleysta ee ka baxa kanaalada kale oo aad la jaan qaadi kartaa warbaahinta bulshada, qoraalada webinar, iwm.
Sidoo kale, raadraaca caan ka ahaanshaha waxyaabahaaga ayaa iftiimin doona qaybo aan si fiican u shaqeynaynin. Waqti ayaad ku qaadan kartaa inaad ku hagaajiso waxyaabaha aan caan ka ahayn, ama si fudud ayaad u adeegsan kartaa fahamka markaad soo saarayso waxyaabo cusub - oo aad uga qiimo badan - maaddooyinka.
Kordhin boggaga SEO-gaaga
Kordhinta mashiinka raadinta (SEO) ayaa muhiim u ah guusha websaydhkaaga sidaa darteedna ganacsigaaga. Xaddiga sare ee taraafikada ee websaydhkaagu soo jiito, ayay sare u kacdaa tirada hogaaminta iyo sheekooyinka.
Falanqaynta websaydhadu waxay ku kobcin karaan SEO-gaaga dhowr siyaabood. Adigoo ka warqaba meelaha ay xiiseeyaan booqdayaashaada iyo tirakoobka dadka, waxaad sifiican u awood u leedahay inaad soo saarto waxyaabaha la bartilmaameedsaday isla markaana aad ka dhex muuqan karto Google iyo mashiinnada raadinta kale. Sidoo kale, tixraacyada tixraaca ayaa ku siin doona aragtiyo dib-u-eegis ah.
Haddii aad isku darsatid aaladda falanqayntaada Google, waad raadraaci kartaa jumladaha raadinta ee u horseeda taraafikada ugu badan boggaaga. Tani waxay waxtar u leedahay in la hubiyo in ereyadaas iyo ereyadaas loo adeegsado nuxurkaaga iyo metadata.
Waxaad xitaa hal talaabo u sii gudbi kartaa oo aad adeegsan kartaa raad raac goob. Tani waxay ku tusineysaa waxay booqdayaashu raadinayaan marka ay soo galaan websaydhkaaga. Xulashadaan lafagurka waxay kuu oggolaaneysaa inaad aragto haddii waxa aad ka kooban tahay ee hadda jira uu la mid yahay rabitaanka booqdayaashaada. Ogaanshaha inaad buuxinaysid iyo haddii kale waxaad ka rajeyneysaa waxay kuu oggolaaneysaa inaad hagaajiso waxyaabaha aad ka kooban tahay si aad u siiso khibradda adeegsashada ugu wanaagsan ugana dhigto booqdeyaasha macaamiisha. Xitaa waad ku kobcin kartaa fikradaha qaar ee maqaalada cusub, sidoo kale.
Tilmaamaha sare ee aqoonsiga
Falanqeeyayaasha websaydhku waxay raaci karaan halka ay badanaa gudbintaadu ka timid. Mar alla markii aad aqoonsatid gudbintaada ugu sareysa, waxaad ka shaqeyn kartaa istiraatiijiyooyinka si aad usii kordhiso. Sidoo kale, ogaanshaha meelahaaga daciifka ah ayaa kuu oggolaanaya inaad hagaajiso iyaga oo aad u abuurto gaadiid badan goobtaada.
Haddii, tusaale ahaan, shabakadaada ay ka hesho inta badan martida soo booqda makiinadaha raadinta, tani waxay kuu sheegaysaa in SEO-gaagu uu si fiican u shaqeynayo. Haddii, dhinaca kale, soo booqdayaashu ay u muuqdaan inay ka imanayaan xayeysiiska Facebook oo ay adag tahay gabi ahaanba ka soo baxda makiinadaha raadinta, waxaad ka sameyn kartaa wax badan oo ka mid ah boggaaga Facebook halka aad sidoo kale cadayaysid SEO-gaaga si ay si fiican ugu adeegsato matoorada raadinta.
Baro xiriiriyeyaashaada dibedda ah
Sidoo kale ogaashada halka ay gudbintaadu ka timid, falanqeeyayaasha shabakadda ayaa kuu sheegi doona cidda aad u gudbineysid, haddii kale loo yaqaan xiriirro bannaanka. Mar alla markaad qorto xiriiriyeyaashaada dibada, waxaad u isticmaali kartaa macluumaadkan si aad ula xiriirto milkiilayaasha websaydhka oo aad u soo jeediso iskaashi wada shaqeyn ah.
Wadashaqeynta lala yeesho meheradaha kale runti waxay kaa gargaari karaan kobcintaada. Dhiirrigelinta is-dhaafsiga iyo talooyinka la wadaago ayaa ah siyaabo wanaagsan oo looga faa'iideysan karo labadaba meheradahaaga iskaashiga. Ogaashaha iskaashiga ganacsi ee ugu waxtarka badan adiga, iyo iyaga, ayaa ah tillaabada ugu horreysa ee abuuridda xiriirradaas muhiimka ah. Waxaad u tagi kartaa ganacsi bartilmaameed ah oo aad la wadaagi kartaa warbixinta falanqayntaada, adoo ka dhigaya suurtogal inay oggolaadaan soo jeedintaada.
Lasoco qiyaasaha elektaroonigga ah
Ganacsigaagu wuxuu iibin karaa adeegyo, badeecado, softiweer ama wax ka duwan wada dhammaantood. Wax alla wixii aad iibiso, warbixinta iibka boggaaga waa warbixin muhiim u ah inaad baratid. Waxaad ku arki kartaa aragtiyo muhiim ah sida sicirka beddelka, xawilaadaha ugu sarreeya, wadarta dakhliga iyo badeecadaha horseed u ah, iwm, dhammaantood hal warbixin gudaheeda. Markaad ogtahay, tusaale ahaan, waxa soosaarkaaga horseed u yahay, waxaad xoogga saari kartaa dadaalkaaga kor u qaadida taasi xitaa ka sii badan kanaalka kala duwan. Xiriirinta habka gudbinta ayaa sidoo kale faa'iido u leh qorshaynta wadashaqeynta mustaqbalka taasoo ka dhalan doonta iib badan. Raadinta metrik-ka ganacsigaaga waa qeyb lagama maarmaan u ah kobcinta ganacsi guuleysta.
Qalab noocee ah ayaa loo isticmaalaa?
Waxaa jira qalab badan oo falanqeyn degel oo la heli karo waana muhiim in laga doorto qalab dhameystiran shirkad lagu kalsoonaan karo, sumcad leh. Falanqaynta Websaydhada Semalt waxay soo bandhigaan agabyo kaladuwan oo kaladuwan oo kaa caawinaya sidii ganacsigaagu u kobcin lahaa.
Waa kuma Semalt?
Waxaa la asaasay 2013, Semalt waa hay'ad dillaacday oo dhammeystiran. Waxay bixiyaan aaladaha websaydhada loogu talagalay adeegyada falanqaynta sare iyo sidoo kale adeegyo fara badan oo SEO ah iyo adeegyo kale oo shabakadeed. Semalt wuxuu leeyahay boqolaal macaamiil oo qanacsan, oo badankood ka tagay qoraal iyo dib u eegis fiidiyoow bogga websaydhka.
Semalt wuxuu kaa caawin karaa inaad:
Qiimee aragtida tooska ah ee shabakada
Baadhitaanno boggaga la tartamaya
Hesho warbixinno heer caalami ah oo dhammaystiran
Kooxda Semalt waxay ku hadashaa luqado badan oo ay ka mid yihiin Ingiriis, Faransiis, Talyaani, Turki, iyo kuwa kale oo badan, markaa ha ka walwalin in luuqadu ay caqabad ku noqoto adiga iyo koboca ganacsigaaga. Xubnaha kooxda ayaa khabiir ku ah goobtaada waxayna diyaar u yihiin inay su'aalahaaga weydiistaan.
Sannadkii 2014, kooxda Semalt waxay u guureen xafiis cusub. Markay yimaadeen, waxay la yaabeen markay ka heleen dabeysha goob ubaxa ah. Baadhitaan kadib, waxay ogaadeen in milkiilihii hore ee milkiilaha uu isagu lahaa laakiin isagu aanu doonayn. Kooxda ayaa ku qanacday kaliya xubin kale. Waxay sii hayn jireen qulqulaha waxayna ugu yeedheen Turbo. Waqti ayey ku bixiyeen barashada cuntada ugufiican ee kunbeellada iyo sida loo daryeelo waxayna si dhaqso leh uga iibsadeen aquarium cusub oo weyn. Hadda, wuxuu ku faraxsan yahay xafiiska Semalt waxaana loo dalacsiiyay shirkada mascot.
Inaad la qabsato falanqaynta websaydh run ahaantii waxay samayn kartaa farqiga u dhexeeya kororka ganacsigaaga, xeebta ama xitaa guul darreysiga. Ogaanshaha booqdayaashaada iyo waxay raadinayaan ayaa fure u ah wanaajinta jiritaankaaga internetka iyo si wax ku ool ah u suuqgeynta badeecadaada. Xulashada aalad sumcad leh sida Semalt Web Analytics ayaa kuu oggolaaneysa inaad raad raacdo waxyaabahaaga iyo guusha iibka, ogaato tirada dadka soo booqda iyo, ugu muhiimsan, hagaajinta booqashooyinkaaga heerka sarrifka iibka.